4C Naanị Nlekọta Nlekọta Anya - Mma
Agbalịrị M Onye Mbụ Mbụ Maka 4C Hair, ọ nyekwara m ihe kachasị mma
4c naanị / Nakeisha Campbell
Arụ ọrụ: 19/20
Mfe iji: 18/20
Ihe na-akpata: 20/20
Aga m adị adị n'ezie na gị: Enwere m obere oge na-enyo enyo nlekọta ntutu isi ngwaahịa ndị na-ahụ maka ụdị ntutu niile dị egwu. Echere m, ee, ọ na-agba ume ịhụ ndị nnọchianya ndị ọzọ maka obodo ndị nwere ntutu isi na ụlọ ọrụ mara mma. Agbanyeghị, ọ dị ka ndị nwere ya 4C-edozi ntutu (tighter coils ndị na-adịkarị mfe nkụ) na-emeso dị ka onye mechara-n'agbanyeghị na ọ na-mara mma doro anya na nke a ntutu ụdị nwere kpọmkwem mkpa.
Ya mere, mgbe m chọpụtara na e nwere akara ọhụrụ emere kpọmkwem maka ntutu 4C, enweghị m ike ịnwe mkpali m. Kwe ka m webata 4C Naanị , Nlekọta ntutu ntutu nke mbụ emere maka naanị ndị nwere ntutu 4C. Dabere na mgbasa ozi ha, na Black-ekesịpde ika emepụtara iji mejupụta oghere dị ukwuu na oghere ntutu isi nke ebumnuche iji mezie mma na udidi nke ụdị ntutu echefuru echefu - 4C.
4C Naanị ugbu a na-enye Oke Mfe Nchịkọta (ugbu a na ere $ 70 ), nke gunyere nhicha nhicha di oke, oke nkpuchi di omimi, oke nro nro na ucha. Agbalịrị m nke ọ bụla, ọ bụghị naanị na isi mkpụrụ osisi ahụ masịrị m, kamakwa ihe na-esi na ya apụta-nke mere na ewere m ihere nke ntutu isi mgbe m jiri ha. Gụọ na ịhụ echiche m n'eziokwu na ngwaahịa ọ bụla.
RELATED: NaturAll Club’s Castor Oil Bụ Naanị Ihe Na-enyere M Aka Itinye Ntutu Isi M
1. Oke ncha ntutu
Mgbe ọ bịara ezigbo mma ncha ntutu , Ihe kachasị m mkpa bụ ike ya ịsacha ntutu m nke ọma na-ewepụsịsịsịsịsị na mmanụ ya niile. Obi dị m ụtọ, ncha ntutu a, nke gunyere akwụkwọ aloe vera na mmanụ argan, mere nke ahụ. M hụrụ n'anya na ntakịrị gafere ogologo ụzọ, ebe ọ bụ na ọ dị ngwa ngwa ngwa ngwa. Dị ka mgbakwunye, ọ na-esi isi ịtụnanya .
Naanị ihu ala ka m jiri mkpịsị aka m kụchaa ncha ntutu a ma jiri aka m tinye ya aka, nke nwere ike ịdị ntakịrị. Ọ bụrụ na, dị ka m, ị malitere na mgbọrọgwụ ma rụọ ọrụ n'okpuru ala gị ka ị na-asa ntutu gị, mgbe ahụ ana m akwado iji karama nwere mkpuchi isi na-enyefe.
Zụta ya ($ 22.50)
2. Oke Thicke Deep Conditioner
Ngwaahịa a na - agbaso aha ya, n'ihi na agbanwe agbanwe dị oke. A na-eji mmanụ grapeseed na organic glycerin eme ya, nke na-enyere aka mee ka ntutu dị nro ma mee ka usoro nfe ahụ dị mfe. Mgbe m jiri shampoo ahụ, ekewaara m ntutu m na nkebi anọ ma were ihe dị ukwuu na tress m. Mgbe m na-apụ n'anya, achọpụtara m na ọ dị ntakịrị ịwụfu n'ihi na enwere ọtụtụ mmịfe. Na mgbe m nọrọ n'okpuru okpomọkụ ya na ihe dịka 15 nkeji, ntutu m nwere mmetụta dị nro dị egwu.
3. Oke Soft Ahapụ-na Conditioner
Naanị iji nye ụfọdụ ndabere, usoro ntinye aha a nwere Behentrimonium Methosulfate (n'agbanyeghị ihe okwu ahụ na-atụ ụjọ na-atụ aro, ọ bụ sulfate na-esite na mmanụ sitere na rapeseed), nke na-eje ozi dị ka nnukwu moisturizer, yana Slippery Elm, nke enyere aka na detangling.
Mgbe m miri emi, etinyere m nke a hapụ-na conditioner , nke nwere nhazi ude, ma ọ bụghị oke dị ka ihe omimi dị omimi. Ejiri m ezigbo ego nke a tupu m gafere na ude styling na, ọzọ, ọ mere ka usoro ịghasị ikuku. Nke a na - ewe m ihe dị ka elekere zuru ezu mgbe m na - eji akara m oge niile, mana na ngwaahịa a, enwere m ike ịmagharị na eriri m na erughị nkeji iri atọ.
4. Oke umengwụ Styling Ude
Ndabere nke ude a dị oke mma, ọ gụnyere Carnauba Wax (ihe okike nke sitere na akwụkwọ osisi nkwụ carnauba), nke na - enyere aka njikwa frizz ma debe edozi isi ogologo.
Nke a bụ otu ngwaahịa m ji nwayọ, n'ihi na m jirilarịrị mmesapụ aka dị ukwuu nke onye na-ahapụ ihe na-edozi. Ka ntutu m ka dị mmiri mmiri, etinyere m obere ego na ngalaba nke ọ bụla ka m na-akwado eriri m maka ịtụgharị. Mgbe ahụ, dị ka ntụziaka ndị ahụ na-atụ aro, ana m ahapụ ya ka ọ kpoo ogologo ụbọchị zuru ezu (ee, ọ na-ekwu n'eziokwu awa 24) tupu ịhapụ ha, ntutu m adịghịkwa ele anya ma na-egbuke egbuke. Ejiri nlezianya kọwaa m ma nwee mmetụta dị nro. Mma, styledị m were ruo otu izu-akaebe na obere ngwaahịa a na-aga a ukwu ogologo ụzọ.
Ikpeazụ ikpe: M ga-eji ngwaahịa a ọzọ? Kpamkpam. Enwere m ike iji ya dochie anya usoro m nkịtị? Ọfọn, ikekwe ọ bụghị. Kemgbe afọ ole na ole gara aga, ntutu m na-aza nke ọma na ụfọdụ ngwaahịa, na m na-ala azụ ime nnukwu mgbanwe na usoro m. Otú ọ dị, m na-ahụ onwe m na-eji ihe ndozi miri emi na-emechi oge, n'ihi na m hụrụ n'anya na ntutu m awụpụghị ihe dị ukwuu mgbe m jiri ya. Nyere na nke a bụ akara ngosi izizi maka ntutu 4C (nke ụmụ nwanyị nwere ntutu 4C mebere), a ga m asị na akara a bara uru nyocha.
RELATED: Echeghị m na agba agba nwa oge na-arụ ọrụ na ọchịchịrị, ntutu ntutu… ruo mgbe m nwara nchịkọta mkpokọta agba agba a
ga-ekiri ihe nkiri maka ụmụaka
mmanụ kalonji maka ntutu isi
bra kacha mma maka obere ara